Dr Fred Matiangi oo ka hadlay ganacsiga Qaadka . - Iftiin FM
Wasaaradda arrimaha gudaha ayaa shaaca ka qaaday in dowladda ay diyaarisay koox cusub oo ka shaqeysa horumarinta iibka khaadka ee gudaha iyo dibadda.
Wasiirka arrimaha guddaha ee dalka Dr Fred Matiangi’I ayaa sheegay in Kooxda cusub oo ka kooban saraakil ka tirsan wasaaradaha dowladda ee ay khuseyso iyo dowladda ismaamulka Meru ay sidoo kale ka shaqeyn doonan xallinta dhibaatada suuqa ka jirta.
Wasiirka oo Maanta ka hadlayay furitaanka Shirka qaran ee khaadka ee Sayniska, ayaa ballan qaaday inuu ka qaybgelin doono Hay’adda Qaran ee Ololaha Ka-hortagga Khamriga iyo Ku Xad-gudubka Maandooriyaha (NACADA) si suuq fiican loogu heelo khaadka.
Dhanka kale Wasiirka Wasaarada beeraha Peter Munya ayaa ku booriyay beeralayda iyo ganacsatada in ay kor uu qadaan Wax soo saarka khaadka isla Markana ay hal abuurnimo la yimadaan.
Barasaabka ismaamulka Meru Kiraitu Murungi ayaa sheegay in shirkan uu socon doono muddo labo maalmood ah isla Markana lagu xoojin doono cadeymaha cilmi baarista ee saameynta uu khaadka ku leedahay fayo-qabka caafimaadka, bulshada iyo dhaqaalaha ugu dambeyntiina ay gacan ka geysan doonaan sidii wax looga qaban lahaa caqabadaha hortaagan waaxdan muddada dheer.
Ceeb uu soo hoyatay shaqaalaha caafimaadka ee dalka .
Prof. Sam Ongeri oo uu tartamaya kursiga barasaabka ee Ismaamulka Kisii
Iftiin FM Reporter December 4, 2021
Musalia Mudavadi oo baaq uu diray Kenyanka
Baarlamaanka Mandera oo ansixiyay hindise sharciyeed muhiim ah
Tababare Ralf Rangnick oo shaaca ka qaaday xiddigaha kooxda ee uu ku faraxsan yahay in uu la shaqeeyo
Maamulka Puntland oo joojisay gaadiidka soo galaya Boosaaso
Liverpool Oo Dajisay Qorshe Ay Ku Helayso Karim Benzema
Haweenka Kenya oo loogu baaqay in ay uu tartamaan dooroshada guud ee...
Hay’adda IMF oo ka hadashay Nooca cusub ee Cudurka corona.
Cidamada Soomaliya oo digniin adag loo diray
Iftiin FM Reporter December 4, 2021 December 4, 2021
Dadka naafada Ismaamulka Kilifi oo baaq uu direen Dowladda dhexe ee dalka